China E-3 Shell Electric Water Fountain Ukukhiqiza kanye nefektri | Amahlaya
I-E-3 Shell Electric Water Fountain isebenzisa ithuluzi lokuhlunga elinezingqimba ezine ukuhlinzeka ngamanzi okuphuza anempilo ezilwaneni ezifuywayo: i-mesh yangaphambi kokuhlunga ukuhlunga ukungcola okunjengezinwele, kanye nensimbi yokuhlunga ephezulu kakotini negobolondo likakhukhunathi elicushiwe ikhabhoni ukuze ihlunge kahle indle , ukugqwala nezinye izinhlayiya ezincane, nokumunca i-chlorine eyinsalela, njll. Izinto ezinobungozi, isendlalelo esingezansi sisebenzisa i-resin resin yokuqinisa ukuhlunga kwama-ion ayingozi njenge-ayoni esindayo ukuze kuthuthukiswe ikhwalithi yamanzi.
Iphampu yamanzi ethule kakhulu
Izilwane ezifuywayo zasekhaya, ikakhulukazi amakati noma imidlwane, kungenzeka kakhulu zibangele ukwethuka noma ukukhathazeka ngenxa yemisindo ephezulu. Ngakho-ke, lapho wondla izilwane ezifuywayo, kungcono ukuthi ungabangi umsindo ongazithinta, ngaphandle kwalokho kuzobenza bazizwe bengazweli. Kodwa-ke, i-E-3 Shell Electric Water Fountain
Sebenzisa ipompo lamanzi elinengcindezi ephansi eyi-12V, ukhiqiza ama-decibel angama-40 kuphela womsindo lapho usebenza, ongaphansi kakhulu kunethamo lokuqashelwa kwezindlebe lomuntu
Imini nobusuku imodi embaxambili
Gcina izimo zokusebenza ezijwayelekile emini, kuthi ebusuku uvule ilambu eliholwa ukukhumbuza isilwane sendawo yomthombo wokuphuza. Isibonelo, uma usesimweni esingaphandle noma lapho uthuthela endaweni yokuhlala entsha nesilwane sakho, ikati noma inja izozizwa ingajwayelene nendawo ezikuyo, ikakhulukazi ebusuku. I-E-3 Shell Electric Water Fountain izobasiza.
Lawula ukuhamba kwamanzi
Uma kuqhathaniswa neminye imithombo yokuphuza ezenzakalelayo, i-E-3 Shell Electric Water Fountain ingalungisa ngokukhululeka ubukhulu bokugeleza kwamanzi, okulungele imikhuba yokuphuza yezilwane ezifuywayo ezahlukahlukene. Inkinobho yokulungisa ukugeleza kwamanzi yakhelwe phezulu, engalawula kalula ukugeleza kwamanzi, okulungele zonke izinhlobo zezilwane ezifuywayo.
Langaphambilini E-2 Umthombo Wokuphuza i-Apple
Olandelayo: Indlu Yezinja Engangenwa Manzi 403